ရန်ကုန်က ငုစပ်ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်နေပြန်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရန်ကုန်က ငုစပ်ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်နေပြန်ပြီ
ရန်ကုန်က ငုစပ်ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်နေပြန်ပြီ
Posted by weiwei on Feb 28, 2012 in Photography, Travel | 21 comments
flowers wei's photos
ပွင့်နေပြန်ပြီလို့ရေးလိုက်တာက မနှစ်က ဒီအချိန်တုန်းက အဲဒီပန်းတွေပွင့်သေးတယ်လေ … ရွာထဲမှာ ရန်ကုန်မှာပွင့်တဲ့ချယ်ရီ ဆိုတဲ့နံမည်နဲ့ တင်ပေးပြီး ပန်းနံမည်စုံစမ်းလိုက်တာ နံမည်ပေါင်းစုံသိခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတော့ ငုစပ်ချယ်ရီပန်းလို့ နံမည်အတည်အကျသိသွားခဲ့ပါတယ် … ဒီနှစ်မှာလဲ အချိန်မှန် ပွင့်လာပြန်တော့ အမှတ်တရ ပြန်တင်ပေးရင်း နောက်ထပ်နံမည်သိချင်တဲ့ ပန်းတစ်မျိုးကိုလည်း ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ဇွန်းနဲ့အကုန်ဆွဲလိုက်ပေမယ့် အပင်ကမြင့်လွန်းတော့ ခပ်ဝါးဝါးပဲ
ချယ်ရီပန်းတွေက အပင်ပေါ်မှာ တစ်လလောက်ကြာအောင် ပွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီပန်းတွေပွင့်ရင် ရုံးခန်းထဲကနေ မြင်နေရပြီး အိပ်ငိုက်ရလေ့ရှိလို့ အိပ်ချင်ပန်းလို့ပဲ ကျွန်မက အလွယ်ခေါ်နေမိတယ် …
သန်လျင်ဘက်သွားလည်ရင်း ညီမအိမ်မှာ ပန်းတစ်မျိုးပွင့်နေတာတွေ့ခဲ့တယ်… အပင်နံမည်ကို မသိဘူး … သူလဲ ငုစပ်ချယ်ရီလိုပဲ ပွင့်ချိန်တူပါတယ်။ ပန်းပုံသဏ္ဍာန်က ငုပန်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး ပန်းရောင်နဲ့ အဖြူရောင်စပ်ထားတဲ့ အရွက်တွေအားလုံးကြွေပြီး အပွင့်တွေပဲ ရှိတဲ့ အလွန်လှတဲ့ ပန်းတစ်မျိုးပါပဲ … ရွာသူားတွေက ဗဟုသုတကြွယ်ကြလို့ ပန်းနံမည်လေးများသိရင် ပြောပြပေးကြပါလို့ အကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ် …
ဒီလောက်ဆိုရင် ဘာပန်းလဲလို့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ် …
နောက်ဆုံးပုံလေးကတော့ ဒါ့ပုံဆြာတွေကို အားကျလို့ လက်တည့်စမ်းထားတဲ့ စက္ကူပန်းလေးပါ …
စက္ကူပန်းလေးလဲ သူ့အလှနဲ့သူပဲ ...
ဒီမနက် ကော်နက်ရှင် တော်တော်ညံ့တယ် … လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေမို့ ချက်ခြင်းတင်ချင်တာနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ၂ နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး တင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် …
ဇွန်း နဲ့ဆွဲလဲ ဝါးတာဘဲနော်..
ဇွန်းကြီးကြီး နဲ့တော့ သိပ်မဝါးဘူးနော်..
ခက်ရင်းလေးပါ ထဲ့ပေးပါနော်။း)
အပွင့်က တော်တော် လှတယ်နော်။
ဒီလောက်ပူတဲ့ နေရာ ချယ်ရီတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ချယ်ရီ ပွင်လို ခပ်ဆင်ဆင် မျိုးပဲနော်။
ပျိုးပင်လေးတွေကို ၀ယ်စိုက်ထားတာ တစ်နှစ်ကြာတော့ အပင်ကြီးလာပြီး အပွင့်ပွင့်လာတော့တာပဲ … တစ်ခါပွင့်ရင် အကြာကြီးခံတယ် … စိန်ပန်းပင်လိုမျိုး အစေ့တွေကနေ မျိုးပြန်ပွားလို့ရသေးတယ် …. လိုချင်ရင် အစေ့ပေးမယ်လေ … အပေါ်က ငုစပ်ချယ်ရီလဲ အစေ့ရှိတယ် …
အပေါ်က အပင်မျိုး အစေ့ ဆိုရင်တော့ လိုချင်တယ်။
ခြံထဲမှာ စိုက်ထားချင်လို့ ပေးပါနော်။
ပန်းလေးတွေက လှလိုက်တာ မဝေရေ …
ချယ်ရီပန်းနဲ့ တော်တော်တူတာပဲ ……………..
ခုနှစ်မိုင် က ဆူဇူကီး showroom ကျော်ကျော်လေးမှာ
အဲဒီလို ပန်းတွေ ပွင့်နေတယ်ဗျ။
အဲဒီ ခုနှစ်မိုင်က ပန်းတွေပဲလား မသိ။
ဒါကတော့ ဇွန်းကြီးကြီးနဲ့ ဆိုတဲ့ ပုံလေး တော်တော်လှပါတယ်။
ဇွန်းကြီးကြီးနဲ့ ပန်းတွေက သန်လျင်က …
အပေါ်ဆုံးက ပန်းတွေက ရန်ကုန်က …
ဆန်းတယ်ထင်ရင် ရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်လေ့ရှိတယ် ….
ဒါပေမယ့် ရိုက်ဖြစ်တိုင်းတော့ မတင်ဖြစ်ပါဘူး … ထူးခြားတယ်ထင်မှပါ …
ရန်ကုန်က ငုစပ်ချယ်ရီပန်းတွေ ပွင့်နေပြန်ပြီ….
ချယ်ရီမတိုင်ခင် ခရီးစဉ်တွေထဲက ပုံတွေစာတွေဖတ်ခဲ့သူပါ..
ခုတော့ Comment လေးတွေဝင်ရေးဖြစ်ခဲ့ပြီ…
ပွင့်ပြန်ပြီလား ဒီနှစ်… အင်း … အဲသလိုနဲ့ တစ်နှစ်ကူးတော့မှာပေါ့လေ။
ချိဖ် အဲဒါလည်း ငုစပ်ချယ်ရီ နောက်တစ်မျိုးပဲ။ ကာလာကွဲပေါ့။
မဝေရယ် ကိုယ့်ညီမလေးဆူးကို မျိုးစေ့မပေးပါနဲ့တော့။
မြင်ရသူစိတ်နှလုံးကို ချမ်းမြေ့စေတဲ့ သဘာဝရှိတယ်လို့ ထင်မိတာပဲ…
ခုတော့ “ပန်းတွေနဲ့ဝေ” ပေါ့လေ…
မမဝေရေ လှလိုက်တာ ကူးသွားတယ်နော်
ဒီပို့စ်က ထူးဆန်းတယ်နော် …
ပန်းကလေးတွေနဲ့ အရောင်လိုက်ဖက်အောင် အနီတွေ တမင်များလိုက်ပေးထားတာလားမသိဘူး ….
နှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုရင်.. ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ အနီက.. #FF0000ကုဒ်ဖြစ်ပြီး.. အစိမ်းက #008000 မျှသာပါပဲ..။
ဒီအပေါ်မှာ လူတွေက.. ခံစားချက်တွေပြင်ထန်နေတာ.. ရယ်စရာမကောင်းဖူးလား
ခြံနဲ့နေရင် အဲ့အပင်လည်း စိုက်ချင်တယ် အရမ်းလှတဲ့ပန်း။ သိပ်သဘောကျနေတဲ့ပန်း။
အဲဒီ “စက္ကူပန်း” ပုံလေး က တစ်အားလှတယ်။
“စက္ကူပန်း” က အရီးရဲ့ အချစ်ဆုံးပန်းတွေထဲ မှာ ထိပ်ဆုံးပါတယ်။
နွေရာသီ အပူကြီး ထဲ မှာ ကို ဝင်း စို နေအောင် အကြာကြီး ဇွဲ နဲ့ ကို ပွင့်နေတော့တာ။
ကျန်တဲ့ နွေ ပန်းတွေ က သူ့လောက် ကို ရေရှည်မခံရှာကြဘူး။
ကျတော့်အိမ်မှာ အဖြူ စွတ်စွတ် စက္ကူ ပန်းတစ်မျိုးရယ် ခရမ်းနဲ့ အနီအစပ် စက္ကူ ပန်းရယ်ရှိတယ်။